हाम्रो जीवनमा रुद्राक्षको महत्त्व-कुन रुद्राक्ष उत्तम ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
हाम्रो जीवनमा रुद्राक्षको महत्त्व-कुन रुद्राक्ष उत्तम ?
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:२१
सद्‌गुरु: रुद्राक्ष विशेष किसिमको वृक्षको दाना हो । साधारणतया, यो पहाडी क्षेत्रहरूको निश्चित उचाइमा वा हिमालयमा पाइन्छ । अचेल नेपाल, वर्मा, थाईल्यान्ड र इन्डोनेशियामा रुद्राक्षको वृक्षहरू पाइन्छन् । दक्षिण भारतको पश्चिमी घाटको केही क्षेत्रहरूमा यसका रूखहरू पाइन्छन् । तर, उच्च गुणस्तरको रुद्राक्ष हिमाली भेगको निश्चित उचाइमा पाइन्छ, किनकि यसमा माटो, वातावरण र सबैकुराले प्रभाव पार्छन् ।
यदि तपाईं विशेष किसिमका दानाहरू लगाउन चाहनुहुन्छ भने, यही उत्तम हुनेछ कि तपाईं कोही यस्तो व्यक्तिबाट ग्रहण गर्नुहोस्, जसलाई यीबारे राम्रोसँग ज्ञान छ— न कि यत्तिकै बजारमा गएर किनेर लगाउने !
रुद्राक्षको दाना एकमुखी देखि एक्काइस मुखीसम्म हुन्छ । यिनलाई फरक–फरक प्रयोजनको निम्ति लगाइन्छ, त्यसैले जस्तोसुकै पसलमा गएर जुनसुकै रुद्राक्ष लगाउनु उचित हुँदैन । गलत किसिमको रुद्राक्षले तपाईंको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउन सक्छ । अधिकांश मानिसहरू एउटा मात्रै मुख भएको एकमुखी रुद्राक्ष लगाउन चाहन्छन्, किनकि यो अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ । जब तपाईंका अनेक रूपहरू छन्, अनेक अनुहारहरू छन् भने, तपाईंले एकमुखी रुद्राक्ष लगाउँदा समस्याहरूलाई निम्तो दिइरहनु भएको हुन्छ ।
पारिवारिक परिस्थितिमा रहनेहरूका लागि रुद्राक्षलाई एउटा तरिकाले ऊर्जा भरिन्छ । यदि तपाईं ब्रम्हचारी वा सन्यासी हुन चाहनुहुन्छ भने, रुद्राक्षलाई एकदमै फरक तरिकाले ऊर्जा भरिन्छ ।
गौरीशङ्कर विशेष प्रकारको रुद्राक्ष हो, जसले तपाईंको ईडा (बायाँ नाडी) र पिङ्गला (दायाँ नाडी) बिच सन्तुलन ल्याउँछ । साधारणतया, मानिसहरू यसबाट समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास गर्छन् । समृद्धि, आर्थिक पक्षसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन । यो कैयौँ रूपहरूमा प्राप्त हुन सक्छ । तपाईंसँग केही नभए तापनि तपाईं जीवनमा समृद्ध बन्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईं सन्तुलित बन्नुभयो अनि जीवनमा समझदारीपूर्वक काम गर्नुभयो भने, समृद्धि आफैँ आउनेछ । यस्तो तब हुन्छ, जब ऊर्जाहरूले राम्रोसँग काम गर्छन्; ऊर्जाहरूले तबमात्र राम्रोसँग काम गर्छन्, जब ईडा र पिङ्गला सन्तुलनमा हुन्छन् । गौरीशङ्करले तपाईंको ईडा र पिङ्गलालाई सन्तुलित राखी यिनलाई सक्रिय गर्दछ ।
जुन कुराको प्राण–ऊर्जा सकारात्मक हुन्छ, त्यसमाथि रुद्राक्ष झुण्ड्याउँदा, घडिको सुईको दिशामा घुम्नेछ । जुन कुराको प्राण–ऊर्जा नकारात्मक हुन्छ, त्यसमाथि रुद्राक्ष झुण्ड्याउँदा, घडिको सुईको उल्टो दिशामा घुम्नेछ ।
अर्को कुरा के भने, जङ्गलमा बसोबास गर्ने साधु र सन्यासीहरू जुनसुकै पोखरीको पानी पिउँदैनथे, किनकि कैयौँ पटक प्रकृतिमा रहेका विभिन्न ग्याँसहरूले गर्दा पानी विषालु वा दूषित भएको हुन सक्दछ । यदि उनीहरूले त्यस्तो पानी पिए भने, यसले उनीहरूलाई अपाङ्ग बनाउन सक्दछ वा ज्यान नै लिन सक्दछ । जब तपाईं रुद्राक्षको माललाई समातेर पानीको माथी झुण्ड्याउनु हुन्छ, यदि पानी राम्रो छ वा पिउन योग्य छ भने, रुद्राक्ष दाँयातिरबाट वा घडिको सुईको दिशामा घुम्नेछ; यदि पानी विषालु छ भने, यो बाँयातिरबाट वा घडिको सुईको उल्टो दिशामा घुम्नेछ । जुन कुराको प्राण–ऊर्जा सकारात्मक हुन्छ, त्यसमाथि रुद्राक्ष झुण्ड्याउँदा, घडिको सुईको दिशामा घुम्नेछ । जुन कुराको प्राण–ऊर्जा नकारात्मक हुन्छ, त्यसमाथि रुद्राक्ष झुण्ड्याउँदा, घडिको सुईको उल्टो दिशामा घुम्नेछ ।
परम्परादेखि यो मानिएको छ कि मालामा दानहरूको सङ्ख्या एकसय आठ र एउटा अतिरिक्त (१०८+१) हुनुपर्छ । अतिरिक्त दानालाई बिन्दु भनिन्छ ।
तपाईंले लगाउनु भएको रुद्राक्ष अरूलाई दिनुहुँदैन वा अरूको रुद्राक्ष लिनुहुँदैन । किनकि, रुद्राक्षले यस्तो स्पन्दन आफूमा सम्मिलित गरेको हुन्छ, जुन तपाईंको लागि सहायक हुन्छ वा भनौँ त्यसमा तपाईंको केही तत्त्व रहेको हुन्छ ।
रुद्राक्षको माला जतिबेला पनि लगाउन सकिन्छ । तपाईं यसलाई नुहाइरहेको बेलासमेत लगाउन सक्नुहुन्छ । यदि तपाईं कुनै केमिकलयुक्त साबुन प्रयोग नगरिकन यत्तिकै चिसो पानीले नुहाउनुहुन्छ भने, रुद्राक्षको दानबाट बेगको पानी तपाईंको शरीरमा पर्नु विशेषत: राम्रो हुन्छ । तर, यदि तपाईं रसायनयुक्त साबुन र तातो पानीको प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने, यो कमजोर हुन्छ अनि केही समयपछि चर्किन्छ । त्यसैले, त्यस्तो समयमा रुद्राक्ष नलगाउनु नै उचित हुन्छ ।
रुद्राक्ष: नकरात्मक ऊर्जाहरू विरुद्ध सुरक्षा कवच
चारवटा वेदहरूमध्ये अथर्ववेद आफ्नो फाइदा र अरूको क्षतिको लागि कसरी ऊर्जाहरूको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे केन्द्रित रहेको छ । जो व्यक्ति यसमा निपुण हुन्छ, यदि उसले चाह्यो भने, अरूमाथि भयानक दु:ख–कष्टहरू पुऱ्याउन सकिन्छ— यहाँसम्म कि मृत्यु पनि !
रुद्राक्ष, नकरात्मक ऊर्जा विरुद्ध एक प्रकारको कवच पनि हो । कुनै व्यक्तिले नकारात्मक ऊर्जाको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हानी पुऱ्याउन सक्छन् । यो सम्भव छ । यो आफैँमा एउटा पूरै विज्ञान हो । चारवटा वेदहरूमध्ये अथर्ववेद आफ्नो फाइदा र अरूको क्षतिको लागि कसरी ऊर्जाहरूको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे केन्द्रित रहेको छ । जो व्यक्ति यसमा निपुण हुन्छ, यदि उसले चाह्यो भने, अरूमाथि भयानक दु:ख–कष्टहरू पुऱ्याउन सकिन्छ— यहाँसम्म कि मृत्यु पनि !
यदि तपाईंले सचेतपूर्वक कृपालाई आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाउनुभयो भने, सबैथोक सहज र सरल बन्दछ । रुद्राक्षले त्यो सम्भावनालाई बढाउँछ ।
परम्परागत रूपमा, मालाहरू सदैव यस्ता मानिसहरूद्वारा बेचिन्थ्यो, जो यसलाई आफ्नो जीवनको पवित्र कार्यको रूपमा हेर्दथे । पुस्तौँसम्म उनीहरूले यहि मात्र गरे । उनीहरूले यसबाट आफ्नो जीविका पनि चलाए । तर, मूलभूत रूपमा यो एउटा मानिसहरूलाई प्रदान गर्नु पवित्र कर्तव्य जस्तै थियो । तर, जसैजसै यसको माग बढ्दै गयो, यो कारोबारको रूपमा स्थापित भयो । रुद्राक्ष जस्तै अर्को दाना पनि हुन्छ, जसलाई भद्राक्ष भनिन्छ । यो विषालु हुन्छ । हेर्दाखेरी दुवै उस्तै देखिन्छन् । यत्तिकै हेरेर अन्तर छुट्याउन सकिन्न । यदि तपाईंले हातमा लिनुभयो अनि तपाईं संवेदनशील हुनुहुन्छ भनेमात्र तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ । यसलाई शरीरमा लगाउनु हुँदैन, तर अचेल यसलाई धेरै ठाउँमा रुद्राक्ष भनेर बेचिन्छ । त्यसैकारण, तपाईंले रुद्राक्षको माला लिँदा भरपर्दो स्रोतबाट लिनु अपरिहार्य छ ।”सद्‌गुरु”
प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:२१
५० लाखसम्म सहुलियत पूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिन मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि लगिँदै
राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई अनुदान नभई ऋण दिने गरी
नेकपा भित्रको विवाद र त्यस्को सन्देश !
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) र प्राकृतिक विपद्का कारण मुलुक यतिबेला थला
राजनीतिक ब्यक्ति नभई भारतीय कर्मचारीको नेतृत्व हुनु उतारचढावको मूल कारण : वीरेन्द्र केएम
पत्रकार वीरेन्द्र केएमले नेपाल-भारतको सम्बन्धमा बेला-बेलामा उतारचढावको मूल कारण राजनीतिक ब्यक्ति नभई भारतीय कर्मचारी नेपालको
पुष्पलालको त्याग र निष्ठाबाट आजका कम्युनिस्ट नामका कमाऊनिष्ठले पाठ सिकुन : उपेन्द्र यादव
जनता चेतनशील हुनै पर्छ। कार्यकर्ता संगठित हुनैपर्छ। क्रान्ति वा परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। यसलाई कसैले रोकेर
लोकमणि पौडेलको पुरानो आलेख : भारतको अयोध्या नक्कली हो, सक्कली नेपालमै
रामायणमा वर्णित सरयू नदी माडी या नारायणी या राप्ती मध्यै कुनै एक हुनुपर्छ । यी
क्रसबीट : नेपाली मिडियाको खबर कति सहि ? [भिडियो तर्क]